घर युरोपियन स्टार लूका जोभिक बचपन स्टोरी प्लस अनर्थल्ड जीवनी तथ्य
लूका जोभिक बचपन स्टोरी प्लस अनर्थल्ड जीवनी तथ्य LB द्वारा
एलबी पूर्ण फुटबल प्रतिभा को पूर्ण रूपमा प्रस्तुत गर्दछ "सर्बिया Falcao". हाम्रो लूका जोभिक बचपन स्टोरी प्लस अनर्थल्ड जीवनी तथ्यले तपाईलाई बचाउनु पर्ने घटनाको पूर्ण खाता आफ्नो बचपनको समय सम्म।
लूका जोभिक बचपन स्टोरी - बचपनको समय सम्म
हो, सबैले लक्ष्यको अगाडि आफ्नो प्रवृत्तिको बारे जान्दछन्, जसले उनलाई युरोपेली फुटबलको सबैभन्दा बढी प्रतिष्ठित फुटबलरहरूमा परिणत गरेको छ। तथापि, फुटबलका केही प्रशंसकहरूले मात्र हातमा लुका जोभिकको जीवनीको बारेमा विचार गर्छन् जुन धेरै रोचक छ। अब अनावश्यक बिना, चल्न सुरु गरौं।
लूका जोभिक बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
लूका जोभिकले डिसेम्बर 23 को 1997rd मा जन्मे Bijeljina, बोस्निया र हर्जेगोविना शहर मा उनको आमा, स्वेतलाना जोभिक र बुबा, मिलान जोभिक (एक पूर्व फुटबलर) को।
जोभिक एक धेरै खराब घर मा आफ्नो आमाबाबु र बहन संग बातार को ग्रामीण गाँउ मा ठूलो भयो जो Bijeljina को 14 माइल दक्षिण हो। उनको जन्मवात अघि, तिनका आमाबाबु र सम्पूर्ण परिवारका सदस्यहरूले शुरुआती 1990 को उत्तेजना र अधिग्रहणको सामना गर्नु भयो जुन बिजेजेना, बोस्निया र हर्जेगोविनामा भयो।
लूका जोवी परिवार र सँगी देशका मानिसहरु एक पटकको शुरुवात 1990 मा उत्तेजना उत्पन्न भयो।
बोस्निया र हर्जेगोविनाको यो अस्थिरताले फुटबलकाहरूलाई समृद्ध क्यारियरबाट रोक्न सकेको थियो र लूका जोभिकका पिताले यो प्राप्त गरेका थिए। दुःखको कुरा, मिलान जोभिकले पार्टिजन बेल्ग्रेडको साथ शौकिया फुटबल खेल्ने अवसर पाएका थिए जसले आफ्नो घरको लागि सानो आय प्रदान गरे।
बढ्दो, कुनै खिलौने वा खेलहरू थिएनन्, केवल फुटबल जसले जोभिकलाई लखेट्यो र आफ्नो पितासँग खेलेको थियो। लूका जोभिकका पिता मिलनले केही समयसम्म आफ्नो ढिलो क्यारियरलाई आफ्नो छोराको माध्यमबाट आफ्ना सपनाहरू बाँच्ने निर्णय गरे।
लूका जोभिक बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
फुटबल-मायालु पिता र एक सहयोगी आमाको रूपमा, यो सुन्दर खेलको प्रेमको लागि मात्र थियो जुन युवा लूका जोभिकमा पढाइरहेको थियो जसले सधैं आफ्नो बुबासँग कुराकानी गरिरहेको थियो। मिलानले आफ्नो छोरालाई फुटबल शिक्षामा फोकस गर्न प्रोत्साहन दिनुभयो कि उनीहरूलाई आफ्नो अदृश्य सपनाहरू जीवित राख्न सहयोगको आशामा।
लुका जोभिक- शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप। आईजीको क्रेडिट
लूका जोभिक5मा 2002 को उमेर मा खेल को लागी पेश गरिएको थियो, त्यो वर्ष उनको फुटबल को लागी फुटबल ले उनको शिक्षा समझौता गर्यो।
2004 मा एक सफल परीक्षण पछि भाग्यशाली लूकाले आफ्नो क्यारियर आधारलाई प्रतिष्ठामा राख्ने मौका पाए मिनी अधिकतमi। यो4र 12 बीचको उमेरका लागि बेलग्रेडमा एक विकास लीग। आफ्नो पहिलो खेल यात्रा गर्न अघि जोभिकले उसलाई सिकाउनुभयो कि कसरी दुवै खुट्टाको साथ काम गर्ने। यद्यपि जोविकले आफ्नो दाहिने पाहुनालाई मन पराए, तथापि, उसले बलियो रूपमा आफ्नो बायाँको साथ बललाई सिक्न सिक्यो।
लूका जोभिक बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
लूका जोभिकको प्रतिभा उनको धेरै पहिलो खेल लीगमा सही देखिन्छ। तपाईंलाई थाँहा थियो?… उनले आफ्नो पहिलो खेलमा टोपी-ट्रिक जिते, एक खेलाडीले क्लबको निर्देशकलाई आफ्नो पितालाई नकद प्रस्ताव गर्नका लागि आफ्नो छोरालाई अझ बढी लक्ष्य जित्न प्रोत्साहित गर्न प्रतिज्ञा गरे।
मिलानले जेभिकलाई प्रत्येक गोलका लागि 'एक्सएनमक्स' प्रदान गर्यो। उनीहरूले 50 डिनारहरूको यात्रा यात्रा पनि तिर्नु भएको थियो जसले उनको घर गाउँबाट बेलग्रेडसम्म लुका ल्याउन लगाए। यी सबै गरियो किनभने उनको छोरो उनको बहुमूल्य खेलाडी मानिन्छ।
जोभिकको एक खेलमा उनले गोल गरेका थिए जहाँ उनले गोल गरेका थिए, उनले टोमा मलिक्कीकी, रेड स्टारको स्काउट, जसले उनलाई रेड स्टार बेल्रिडेसँग परीक्षण गर्न निम्तो दिए। लुका जोभिकले उकालो रंगको साथ पारेर उनी क्लबमा सामेल भए। तल रङको रङमा उनको फोटो छ।
Luka Jovic प्रारम्भिक करियर लाइफ
क्लबमा सामेल हुनअघि जोभिकका पिताले एक पटक उनलाई पार्टिज़नसँग प्रशिक्षण दिन थाले, उनले एक खेलाडीसँग खेलेका थिए जसको लागि उनीहरूले जोवीमा हस्ताक्षर गर्न थाले। Partizan उनको छोरा Luka Jovic को लागि हरेक महिना मिलान मिलान 200 यूरो को पेशकश को, तर उनले आफ्नो दिमाग बदल दिए र आफ्नो साना केटा मा लाल स्टार संग रहन को लागि मा आग्रह गरे।
लूका जोभिक बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- सडकको प्रसिद्धि कथा
जोवी युवा युवायुवतीहरुमा चमक जारी राखयो र चाँडै भविष्य को लागि एक आश्चर्य को रूप मा मानिन्छ। एक किशोरावस्थामा बढ्दै गयो, तिनले इब्राहिभोभिक र राडीमेल फ्लाकोओलाई चिन्ता गर्न थाले। तपाईंलाई थाँहा थियो?… एक पटक आफ्नो फेसबुक प्रोफाईलमा आफ्नै मूर्तिहरूको नाम लेख्दा ब्रकेटमा एक पटक लेखियो।
28 मई 2014 मा, 16 वर्ष को उमेर मा, जोविकले आफ्नो पेशेवर पहिलो पल्ट रेड स्टार संग गरे। आफ्नो व्यावसायिक क्यारियरमा शुरुमा उनले डान्स स्टेनभोकीको रेकर्डलाई क्लबको इतिहासमा प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा सबैभन्दा कम गोलकर्ताको रूपमा तोडे।
लोका जोभिक रोड फेम स्टोरी। RedStar र IG लाई क्रडिट
यो प्रभावशाली विशेषताले सबै युरोपेली क्लबहरूलाई उनको हस्ताक्षरको लागि हेर्छ। एक निर्णय पोष्ट 2016 को फेब्रुअरीमा भयो जब जोसिभले नयाँ चराहरु लाई जाने निर्णय गरे। 18 वर्षीया फुटबल स्टारले आफ्नो क्यारियरको पहिलो मुख्य कदम बनायो जब उनी पोर्चुगलका लागि बेन्फिकामा सामेल भए।
जोभिक बेनफिकामा थिए, त्यहाँ फुटबल लीकहरू द्वारा रिपोर्टहरू थिए जो जोकीको सम्झौतामा निहित चासो देखाइएको थियो, समाचारको एक टुक्रा जसले जवान स्टारलाई प्रस्ट पार्छ। पछि फेरि, जोसिभ विकासमा स्थिर हुन थाले र यो युवा फुटबलरको लागि धेरै सतावट भयो।
लूका जोभिक रोड अफ फेम स्टोन- जब गोइ भेटियो। आईजीको क्रेडिट
"म मानसिक समस्याहरू थिए, म घरपरिवार थियो र मैले गम्भीर गल्ती गरे।"
जोभिकले भन्नुभयो Breakingthelines रिपोर्ट गर्नुहोस्। सर्बिया फर्वार्ड जुन एक पल्ट एक पल्ट रेड स्टार मा पहिलो-छनोट रेकर्ड ब्रेकर बाट गयो भने बेन्जेका बीमा सेगunda ली को खेल को लागि खेलन को लागी स्वयं को निशाना बनाया।
लगभग युरोपमा बिर्सनु पछि, एक क्लब उनको सर्बियाका लागि जारी निरन्तर अनुरोधमा उभिएको थियो। यो जर्मन क्लब इन्ट्राचट्ट फ्रान्कफर्ट थियो जसले अन्ततः उनको बेफिका हिज्जेको सपनाबाट ज्योतिलाई बचाए। क्लबले उनलाई ऋणमा स्वीकारे र पछि उनको सम्झौतालाई स्थायी बनायो।
लूका जोभिक बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- फेम स्टोरीमा उठाउनुहोस्
जर्मनीमा स्कन्टिलिटिङ सेन्टिभमेसन पछि, स्ट्यान्डी र द्रुत फर्वार्डले आफ्नो फारम प्राप्त गर्यो र इन्ट्राचट्क फ्रान्कफर्ट पहिलो टोलीको अभिन्न भाग बन्नुभयो। जोभिकलाई एक जनाको रूपमा चिनिन्छ जुन दुवै खुट्टाले बल क्रिसको स्ट्राइक गर्छ। उहाँ समयको सहज ज्ञानको साथ आशिष् बन्नुभयो, जसले सुन्दर सुन्दरता र विशाल उत्सवमा ल्याएको छ।
Luka Jović फेम स्टोरी मा उदय। Playingfor90 को क्रेडिट
जोभिकले उनीहरूलाई युरोपेलीको सबैभन्दा सानो र सबै भन्दा कम गुणहरू बन्न उत्प्रेरित गर्दा एक मौसमवर्ती वृद्धिलाई सहज पारे। टीउनले सर्बियालाई फर्काए जुन रियल म्याड्रिडले आफ्नो ढोका खोलेका छन्, ऊ उच्च र बलियो बनाइदिएका छन् र उनीहरूले ग्याँस पेडलहरू बन्दै गएका छैनन्। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो।
लूका जोभिक बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- सम्बन्ध जीवन
जोभिकको प्रसिद्धिको उकालोमा, यो निश्चित छ कि उनको प्रशंसकहरू निश्चित रूपमा जलिरहेको प्रश्न सोध्छन्। लूका जोभिकको प्रेमिका को हो, पत्नी या केहि को रूप मा यो, WAG?
लुका जोभिक रेजि स्टार बेलग्रेडको साथ उनको युवा क्यारियर दिनबाट अन्डेला म्यानिटस्विभ संग सम्बन्ध रहेको छ। तलको प्रारम्भिक वर्षको दौडान माया पक्षीहरूको तस्बिर हो।
लुका जोभिक सम्बन्ध जीवन - अनर्थ तथ्यहरू
माथिको तस्विर माथि र तल एक को लागी, यो स्पष्ट छ कि एन्डजेला Manitasevic उनको मानिस भन्दा पुरानो हुन सक्छ। कसलाई मतलब!! सबै पछि, साँचो प्रेम महत्त्वपूर्ण छ र उमेर मात्र एक नम्बर हो।
अंजला म्यानिटसेविक र लूका जोविक
लुका जोभिक उनी र उनको प्रेमिका दुवै अंजेला मनिष्टेसिकको सट्टामा सोशल मिडियामा देखाउन जान्छन्। बिना असम्भव, दुवै मित्रतामा निर्मित ठोस सम्बन्धको आनन्द लिनुहोस्।
अंजला म्यानिटसेविक र लूका जोभिकको गुणस्तरको समय बहिष्कार गर्न मनपर्छ
तथ्य यो हो कि दुवै प्रेमीहरु थोडा देर को लागि डेटिंग मा रहेको छ कि कुनै संदेह छैन कि एक विवाह उनको लागि अर्को औपचारिक कदम हुन सक्छ।
लूका जोभिक बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- व्यक्तिगत जीवन
जान्नुपर्छ लूका जोभिकको व्यक्तिगत जीवनले तपाईंलाई उनको पूर्ण चित्र प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ। बन्द गर्दै, जोभिकले खुला दिमाग गरेको छ। उहाँ धेरै आशावादी, उत्साहजनक हुनुहुन्छ र परिवर्तनहरू मनपर्छ। जोभिकले आफ्ना विचारहरू कंक्रीट कार्यहरूमा परिणत गर्न सक्षम छन् र आफ्नो क्यारियर र व्यक्तिगत लक्ष्य प्राप्त गर्न केहि गर्न सक्नेछ।
फुटबल खेलाडीहरू, जस्तै हामी लाइभबोगरमा हाम्रा पाहुनाहरूलाई प्रेम गर्छौं र लुका जोभिक आफैं अपवाद छैन। त्यहाँ पनि त्यहाँ एउटा भन्न छ कि त्यहाँ आधुनिक खेलमा कुनै वफादारी छैन, यो जोभिक, तिनका कुकुर र बाँदर बीचको सम्बन्ध सम्बन्धमा लिने छैन।
लुका जोभिक पर्सनल लाइफ तथ्य
लूका जोभिक बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- LifeStyle Life
जोभिक £ 49.50 मा मूल्यवान छ जुन शाब्दिक अर्थ हो त्यो एक मिलियन फुटबलर हो। तथापि, उनीहरूको सोशल मिडिया अकाउन्टबाट निर्णय, उनी फुटबलरको प्रकार हो जसले आफ्नो मोनिजहरू दुवै देश र पानीमा लक्जरी यात्रा गर्छ।
Luka Jovic जीवन शैली
जेभिक, तथापि, धेरै प्रभावित कारहरू, बोजी, धैर्य र गर्भनिरोधकहरूको मुट्ठीले ध्यान दिएर छैन। उहाँ जीवनका ती पक्षमा आफ्ना मोनीहरूलाई प्रबन्ध गर्ने बारेमा चासो हुनुहुन्छ।
लूका जोभिक बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- पारिवारिक जीवन
लुका जोभिकको पारिवारिक मूलको बारेमा बोल्दै, तिनीहरू यूगोस्लाभियाबाट जडहरू छन् जुन द्वितीय विश्वयुद्ध पछि6वटा छानबिन बोस्निया र हर्जेगोविना। 1975 मा जन्मा लूका जोभिकका पिता मिलान, सर्बियामा स्थित पार्टिजन फुटबल क्लबको पूर्व बायाँ-विंग थियो।
लुका जोभिकका पिता-मिलन जोवी। Nostalgija
आफ्नो छोरा लुकाको विपरीत, मिलानले आफ्नो क्यारियरमा धेरै राम्रो उचाईहरू पाएनन्। उहाँले 82 मा आफ्नो जूता फाँट गर्नु अघि वर्ष 2000 मा रूसी प्रिमियर लिग जीतने आफ्नो वरिष्ठ कैरियर मा केवल 2003 म्याच खेले।
मिलान जेभिक र उनको पत्नी स्लिलालियाले सर्बियामा आफ्नो छोराको धनको बाबजुद सर्बियामा मध्य-वर्ग जीवन बिताउने छन। यो जानकारी जर्मन हुँदा आयो BILD सर्बिया एक पटक सर्बियामा लुका जोभिक्स परिवारको घरको लागि निशानहरूको खोजीमा गए। तिनीहरूले आफ्नो बुबा र उनीहरूको मध्य-वर्ग पारिवारिक स्थिति पत्ता लगाए।
लुका जोभिकका पिता -पपा मिलन। क्रेडिट तस्वीर
ब्लाइड संग साक्षात्कार को समयमा, मिलान जोविक ले एक पल्ट उनको एक पल्ट उनको पत्नी, Svetlana धोखा दिए आफ्नो छोरा को क्यारियर को लागि र यो प्रक्रिया मा आफु को लागी लिया। आज, जोभिकका पिता, आमा, बहिनी र आफन्तहरूले परिवारको शिरमा खरिद गरेको खतराको फाइदा उठाए।
लूका जोभिक बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- अनियमित तथ्यहरू
तपाईंलाई थाँहा थियो?… नोभेम्बर 2015 लुका जोभिकको परिवारको लागि एक प्रयास महिना थियो। यो एक समय थियो जब लोज्निका (सर्बियाको एक शहर) बाट लडाकुको हातबाट बच्न परिवारले लुका जोभिकलाई धम्की दिए कि यदि उसले उसलाई पैसा तिर्न सक्दैन भने उसले "आफ्ना खुट्टाहरू ब्रेक गर्नुहोस्"।
लूका जोविक अनल्टल्ड तथ्यहरू। YouTube र आईजीको क्रेडिट।
संदिग्ध गिरफ्तार भएको थियो जोभिकका आमाबाबुले उक्त मुद्दालाई प्रहरीलाई जानकारी दिए जुन उनको समय खोजी गर्न र अपराधीलाई किताब लेख्न लगाए।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… लूका जोभिकले एक पटक पेसोवाका शहर मा बोस्निया र हेर्जेगोविना को बिज्जेजेना को जन्म स्थल नजिकै उनको मर्सिडीज कार संग एक दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनामा लूका जोवीले घाइते भएका थिए तर केही छिटो हस्तक्षेप पछि तुरुन्तै उद्धार गरियो।
लूका जोभिकले एकपटक दुर्घटना पारे। क्रेडिट फीनिक्स.
तपाईंलाई थाँहा थियो?… जोभिकले आफ्नो छातीमा टाट राखेका छन्, जसले आफ्नो प्रशंसकलाई कुन कुरामा प्रशंसक राखेको छ।
Luka Jovic टैटू तथ्यहरू
खैर, यो येशूको एउटा छवि जस्तो देखिन्छ जुन यसको मसीही ओर्थोडक्स धर्मलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ जुन सर्बियामा धेरै भन्दा बढी छ। जोभिकले पहिले रूसमा 2018 फीफा विश्व कपको दौडान यो टैटूलाई बताए।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… जोभिक सबै भन्दा सानो उमेरका खेलाडी एक मात्र बन्डस्लेगा खेलमा पाँच गोल गर्न को लागी हो। रबर्ट लुवेन्डोकी द्वारा पहिले रेकर्ड गरिएको रेकर्ड। तल एक म्याचमा उनको रेकर्ड-ब्रेक पाँच गोलहरूको भिडियो हो।
लूका जोभिक बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- भिडियो सारांश
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो लूका जोभिक बचपन स्टोरी प्लस अनर्थल्ड जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाईंले केहि कुरा खोज्नुहुन्छ जुन सही देखिएन भने कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी सधै आफ्नो विचारहरुको मूल्य र आदर गर्नेछौं।
सर्बियाई फुटबल डायरी
अगस्ट 22, 2018
डेभीड लुइज बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
अक्टोबर 27, 2017
त्यसो भए उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराउनु पर्दछ
फेब्रुअरी 9, 2019